Local – Page2– A Phaw Mon
ဗိုလ်နဂါးနှင့် ပင်လယ်နဂါးစစ်ဆင်ရေးမှာ ဗျာများနေသော စစ်ကောင်စီ
ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဟာ ပြည်သူ့အင်အားနဲ့သာ တိုက်ယူရမယ်ဆိုတာ တော်လှန်ရေးအချိန်ရလာတော့ တဖြေးဖြေး သိလာကြပါပြီ ။ သို့ပေမယ့် ပြည်ပအကူအညီကရော မရဘူး ၊ မျှော်လို့မရဘူးဆိုတာကလည်း ပြောလို့တော့မရသေးပါဘူး ။ တော်လှန်ရေးစခါစကတော့ ကုလ ၊ အမေရိကန် ၊ ကွာဒ့် ၊ နေတိုးအဖွဲ့တွေကို ပြည်သူတွေမျှော်သလို စာရေးသူလည်း မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ဒါမှလည်း အချိန်တိုအတွင်းမှာ စစ်အာဏာဝါဒကို အမြစ်နုတ်နိုင်မှာမဟုတ်လား …
မကောင်းရင်ပြင် မစွန်ရင်ပြောင်း ဒီပွဲအောင်နိုင်ကြောင်းကတော့ ကျွန်ုပ်တို့တတွေဟာ လက်တွဲကိုတွဲပြီးတိုက်ရမှာပါ……
ပြည်သူတွေ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့…… MRDA ဆိုတဲ့မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်ဟာ NUG ရဲ့ပံ့ပိုးမှု ပြည်သူလူထုရဲ့ ဝန်းရံအားဖြည့်မှုနဲ့အတူ ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တဲ့လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ဆီကို ရောက်အောင်ချီတက်မှာပါ…… NUG ဟာလည်း အားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ရင်း အခက်အခဲ ပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး မြေပြင်က ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်နဲ့ ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်လာနေတာတွေ့ရတယ်……. လက်နက်တပ်ဆင်မှုအပိုင်းတွေကြိုးစားစီစဉ်လာနေပါတယ်…… ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလို ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ (NUG) အစိုးရ အားနည်းချက်ရှိကြရင်လည်း အပြန်လှန်ပြုပြင်ရင်း လက်တွေမြဲထားရမှာပါ…… မကောင်းရင်ပြင် …
အလွတ်ကျက်ပညာရေးကိုနှစ်(၃၀) စီမံကိန်းဖြင့်တိုက်ထုတ်ကာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီပညာရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်တော့မည့် မင်းအောင်လှိုင်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲဝင်းဦး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန …
ဝဏ္ဏမောင်လွင်တို့အုပ်စု The Hague ထိသွားပြီ အမှုရင်ဆိုင်ဖို့ တကယ်သတ္တိရှိရဲ့လားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။
ICJ မှာ အမှုရင်ဆိုင်ဖို့သွားတဲ့အခါ Amsterdam လေဆိပ်မှာ ခြေချတာနဲ့ ဘယ်လိုrisk တွေရှိသလဲဆိုတာ မအလ စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စု ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလ ICJ ပထမဆုံးကြားနာမှုအပြီး MRTV က ဦးကျော်တင့်ဆွေတို့ စကားဝိုင်းမှာ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဆွေးနွေးတယ်။ ICJ အမှုမှာ ဂမ်ဘီးယားတစ်နိုင်ငံတည်း မဟုတ်တော့ဘဲ နယ်သာလန်နဲ့ ကနေဒါတို့လည်း တရားဝင် ဝင်ပါထားတယ်။ …
ယနေ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် ဗိုလ်နဂါး၏မိန့်ခွန်းပြောပြီ
ရဲဘော်တို့……တော်လှန်ရေးရဲ့ခရီးက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးပင်ပန်းလာတဲ့အခါ……. နည်းနည်းမှနောက်မတွန့်မိ နောင်တမရမိကြပါစေနဲ့……. ဒီလမ်းဟာ ရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးခဲ့ကြတဲ့လမ်းရယ်မို့ ဒီစကားပြောရခြင်းမဟုတ်ဘူး…. လူပီသတဲ့ လူ့တာဝန်ကျေပြွန်လိုတဲ့ ဘယ်သူမဆို ရွေးကိုရွေးရမယ့်လမ်းဖြစ်နေလို့ပဲ…… #ဗိုလ်နဂါး #မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော် Zawgyi ရဲဘော်တို့…… တော်လှန်ရေးရဲ့ခရီးက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီးပင်ပန်းလာတဲ့အခါ……. နည်းနည်းမှနောက်မတွန့်မိ နောင်တမရမိကြပါစေနဲ့……. ဒီလမ်းဟာ ရဲဘော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးခဲ့ကြတဲ့လမ်းရယ်မို့ ဒီစကားပြောရခြင်းမဟုတ်ဘူး…. လူပီသတဲ့ လူ့တာဝန်ကျေပြွန်လိုတဲ့ ဘယ်သူမဆို ရွေးကိုရွေးရမယ့်လမ်းဖြစ်နေလို့ပဲ…… #ဗိုလ်နဂါး #မြန်မာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော် ရဲေဘာ္တို႔……ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ခရီးက ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းၿပီးပင္ပန္းလာတဲ့အခါ……. …
ပုလဲ PDF ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးနှင့် နိုင်ငံတကာရောက်မိတ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲ၌ အလှူရှင်များမှ (၅၈၅)သိန်းလှူဒါန်း
NUG အစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊The Satellite for Myanmar Democracy နှင့် နိုင်ငံတကာရောက် မိတ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပုလဲ PDF ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နဂါးဒအလှူရှင်များမှ (၅၈၅)သိန်းလှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှလည်း စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် သိန်း(၅၀) ထပ်မံပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ၁၅.၁.၂၀၂၂ နေ့ ပမာဏ တွေ့ဆုံပွဲ၌ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ …
ကြင်စိုးတစ်ယောက် အဲ့နဂါးမှမမိရင် တွေ့တဲ့နဂါးအကုန်ဖြိုကွာလုပ်လိုက်တာ
ကြင်စိုးတစ်ယောက် စစ်ကိုင်းမှာ ဗိုလ်နဂါးအမုန်းဖြဲတော့ တဘောင်အရ ငါတော့ နားကားတော့မှာပဲဆိုပြီး ဗိုလ်နဂါးကိုသုတ်သင် ရှင်းလင်းဖို့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်တော့တယ် ဗိုလ်နဂါးက လက်နက်ကြီးလဲပြီး လေယာဥ်လဲပျောက်ဆိုတော့ ကဲ အဲ့နဂါးမှမမိရင် တွေ့တဲ့နဂါးအကုန်ဖြို့ကွာလုပ်လိုက်တာ ဘုရားကနဂါးတွေ ပြေးရ မယ့်ကိန်းဆိုက်လာတော့တာပါပဲ ခက်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နဂါးမရှိတဲ့ဘုရားမှမရှိတာ စနေထောင့်ရေသပ္ပယ်မယ်ဆိုရင်တောင် နဂါးကအဆင်သင့် မိန့်မိန့်ကြီးမလား ကြင်စိုး နဂါးစစ် ဆင်ရေးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်း နားကားပါတော့မယ် ဝဇီပိတ်လဲ ဝဇီသာပိတ်လို့ …
စာရေးအ သ/ တ်ခံရလို့ အုပ်ကြီးကကြောက်ပြီးနှုတ်ထွက်သွားကာမှ နောက်တစ်ယောက်တက်လုပ်တော့
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ကျော်ဇံကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းဝင်းထွဋ် ​ေ သ န တ်ဖြင့် ပ စ်ခံရကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရသည်။ ဦးသန်းဝင်းထွဋ်သည် စစ်ကောင်စီခန့်သည့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ်ဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီကျော်တွင် ပ စ် ခ တ်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ …
မြန်မာစစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့မှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်ဖြေရှင်းခဲ့စဉ်က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရှေ့နေလိုက်ပေးခဲ့သည့် ရှေ့နေ ဝီလီယံ ရှာဘားစ် နုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ The Hague မြို့ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်က တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေ့နေ ဝီလီယံ ရှာဘားစ်ဦးဆောင်၍ မြန်မာဘက်မှ ခုခံချေပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏နေရာတွင် …
ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လေယဥ်တွေကို မပစ်နဲ့ အရည်အချင်းရှိရှိ လေယဥ်ပေါ်က ကောင်တွေကိုပဲ မှန်အောင်ပစ်ပါလို့ မှာကြားလိုက်တဲ့ ဇော်မင်းထွန်း
“ကျတော် အထူးပြောလိုတာက လေယာဥ်သုံးတာမှန်တယ်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းနဲ့အညီ သုံးတာဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ နားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် ပစ်တာခတ်တာကိုကျတော့ လေယာဥ်က ပစ်တာမဟုတ်ဘူး။ လေယာဥ်ပေါ်မှာ ပါတဲ့သူတွေကပဲ လုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိစေလိုတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလေယာဥ်တွေက ဒေါ်လာသန်း ၃၀လောက် ပေးထားရတာဖြစ်လို့ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းကို တန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ ပစ်ခတ်ပြီး မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့.။ ပျက်ဆီးသွားတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း အရမ်းနစ်နာတယ်။ ဆိုလိုတာက ဗျာ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ လေယဥ်တွေကို …